Ra’iisul Wasaaraha oo ka baaqday safar uu maanta ku tagi lahaa magaalada Gaalkacyo | Sagal Radio Services
Socdaalka Ra’iisul Wasaaraha ayaa waxaa qeyb ka ahaa Wasiiro ka tirsan Xukuumadda iyo Xildhibaano, waxaana si rasmi ah loo ogeyn sababaha dib u dhacooda, iyadoo magaalada Gaalkacyo laga dareemayay soo dhoweynta wafdiga Ra’iisul Wasaaraha.
Hase ahaatee xiriiro aan la sameynay Xafiiska Ra’iisul Wasaaraha ayaa naloogu xaqiijiyay in arrimo farsamo darteed uu safarka Ra’iisul Wasaaraha dib ugu dhacay, isla markaana maalinta berri oo jimco ah u ambabixi doono Gaalkacyo.
Wafdiga Ra’iisul Wasaaraha ayaa qorshahooda yahay in labada dhinac ee xiisada ka dhaxeyso ay dhex dhigaan heshiis nabadeed, iyagoo kulamo la qaadan doono mas’uuliyiinta labada maamulka, oo ay kala hadlayaan sidii xiisada loo dejin lahaa.
Xukuumadda Soomaaliya ayaa dadaal ugu jirta sidii loo xalin lahaa xiisada colaadeed ee ka dhex aloosan Maamulada Puntland iyo Galmudug, kuwaasoo maalmo ka hor ciidamo kala taabacsan ku dagaalamay magaalada Gaalkacyo.
Barakac xoogan ayaa labadii maalmood ee la soo dhaafay ka jiray magaalada Gaalkacyo, iyadoo dad u badan haween iyo caruur ay ka qaxeen magaalada, kuwaasoo u cararay tuulooyinka iyo deegaanada kale, si ay uga bad baadaan xiisadaha dagaal ee ka jira magaalada.
Labada dhinac ayaa wada abaabulo ciidan, iyadoo magaalada ay soo galayeen ciidamo gurmad ah oo labada dhinac ah iyo gaadiid fara badan oo kuwa dagaalka, taas ayaana keentay in xiisada ay cirka isku sii shareerto.
Kulamo ay yeelanayaan odayaal, waxgarad, culumaa’udiin iyo Ganacsato labada dhinac ayaa si rasmi ah la isugu waafaqi waayay in la kala qaado ciidamada is hor-fadhiya, waxaana jiray qodobo la isku mari waayay oo qaarkood ahaa shuruudo adag.